Njem na elu igwe na bombu ndị iro gị na gị agha na i nwere ike iji kwadebe onwe gị. Họrọ ugbo elu agha gi ma nwe ike nke ike nke ikuku na agha Sky. Gwuo megide ezigbo ndị egwuregwu na ọgụ PvP nịntanetị. Lelee eserese-larịị ndịna-emeputa na nkọwapụta dịka egwu dị ka War Thunder. Nwee ahụmịhe ahụ site na iji ụgbọ elu pụrụ iche 15, nke ọ...